जबज नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको आधारभूत चरित्रबाट सिर्जित दस्तावेज हो
बहसमा जबज ३
बेदुराम भुषाल काठमाडाैं, २२ भदाै
अहिले नेकपाभित्र पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त बहस छ । तत्कालीन एमालेका नेता मदन भण्डारीले प्रतिपादन गरेको भनिएको जनताको बहुदलीय जनवाद र तत्कालीन माओवादी केन्द्रको २१औं शताब्दिको जनवादलाई समेटेर ‘जनताको जनवाद’ बनाउने निर्णय भइसकेको छ । तर, अझै पनि दुबै सिद्धान्तबीच कुन सर्वश्रेष्ठ भन्ने मतअभिमत जारी छ । शिलापत्रले तत्कालीन समयमा विश्वलाई दृष्टिकोण दिएको भनिएको जबजका विषयमा वामपन्थी नेता तथा विश्लेषकहरुको विचार समेट्ने प्रयास गरेको छ, बहसमा जबज शीर्षकमा । प्रस्तुत छ, यसै शृंखलाको तेस्राे विचार नेकपा नेता बेदुराम भुषालकाे । (भुषालसँग शिलापत्र सहकर्मी सागर चन्दले कुराकानी गरेका हुन् । ) सं।
मार्क्सवादकाे अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास
जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) नेपालको विशिष्ट परिस्थितिमा मार्क्सवादकाे सिर्जनात्मक प्रयोग गर्ने क्रान्तिकारी विचार हो । मार्क्सवाद क्रान्तिकारी वैज्ञानिक सिद्धान्त हो । मार्क्सवादको प्रयोग विश्वभर आआफ्नै तरिकाले भएको छ ।
मार्क्सवाद प्रयोगको पहिलो चरण पेरिस कम्युन हो । बिर्सन नहुने तथ्य के हो भने पेरिस कम्युन पनि जनताद्वारा निर्वाचित थियो । त्यसैलाई मार्क्स र एगेल्सले सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वको रूप यही हो भन्दै व्याख्या गरेका हुन् । तर, पेरिस कम्युनमाथि ठूलो दमन भयो ।
पश्चिम यूरोपमा कम्युनिष्ट आन्दोलन कमजोर भयो । लेनिनको नेतृत्वको क्रान्तिले रुसमा मजदुर र किसानलाई एकै ठाउँमा ल्यायो ।
पेरिस कम्युनभन्दा रुसी क्रान्ति भिन्न थियो । पेरिस कम्युन मजदुरहरूको मात्रै विद्रोह थियो भने रुसी क्रान्ति मजदुर र किसान मिलेर गरिएको थियो ।
रुसको अक्टोवर क्रान्तिले शहर र गाउँलाई जोड्यो । तर, दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, यो क्रान्ति असफल भयो । रुसभित्रैका पार्टी पनि क्रान्तिको विरोधमा उत्रिएपछि त्यहाँ कम्युनिस्ट पार्टीबाहेकका अन्य पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने अवस्था सृजना भयो । यसैको उपज त्यहाँ सोभियत सत्ता भनेर सरकार बनाइयो । र, कम्युनिष्ट पार्टीको एकल सत्ता चलाइयो ।
त्यसपछि दोस्रो विश्वयुद्धका दौरान र भियतनाम, चीन, उत्तर कोरियाजस्ता देशमा क्रान्ति भए । पूर्वी यूरोपमा सोभियत संघकै जस्तो मोडल अपनाउने अभ्यास गरियो । यही अवधिमा लेनिनको मृत्युपछि सन् १९२८ मा एउटा सम्मेलन भएको थियो । त्यो सम्मेलनले सोभियत राज्यसत्ता नै श्रमजीवी वर्गले चलाउने उत्तम व्यवस्था हो । र, सबै कम्युनिस्ट पार्टीले यही मोडल अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्यो ।
सोभियत संघको मोडललाई बोकेर विश्वभरका बहुमत कम्युनिस्ट पार्टी हिँडिरहेका थिए । तर, चीनमा माओ भने यूरोपको त्यो सिद्धान्त हुबहु लागू गर्ने पक्षमा थिएनन् ।
यूरोप र चीनको परिस्थिति फरक रहेको भन्दै उनले फरक ढंगले मार्क्सवादको प्रयोग भनेर नयाँ अभ्यास गरे । चीन अनुकूल हुनेगरी मार्क्सवादलाई व्याख्या गर्ने शैलीलाई माओले ‘नयाँ जनवादी बाटो’को नाम दिए ।
माओले भनेको नयाँ जनवादअनुसार श्रमजीवी वर्गले सत्ताको नेतृत्व गर्छ । र, यो व्यवस्था समाजवादतर्फ उन्मुख हुन्छ । पेरिस कम्युनले मजदुर विद्रोहको रूप दिँदै माक्र्सवादको व्याख्या गर्यो । मजदुर सत्ता बनायो । सोभियत संघमा मजदुर र किसान जोडेर माक्र्सवाद लागू गर्ने प्रयास गरियो । सोभियत संघमा एकदलीय व्यवस्था लागू गर्ने प्रयास पनि गरियो ।
चीनमा, भियतनाम र कोरियासम्म पुग्दा पिपुल्स डेमोक्रेसी भन्दै मार्क्सवादको नयाँ व्याख्या भयो । अर्थात् फरकफरक परिस्थितिमा फरकफरक ढंगले माक्र्सवाद कार्यान्वयन भएको छ ।
नेपालमा मार्क्सवादको शुरुवात
जनताको बहुदलीय जनवाद यत्तिकै हचुवामा आएको दस्तावेज होइन । नेपालमा मार्क्सवाद लोकतान्त्रिक चरित्रसहित प्रवेश गरेको हो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना हुने दिन पारित गरिएको दस्तावेजको शीर्षक थियो, ‘नागरिक स्वतन्त्रता सबैलाई आवश्यकता अतः क्रान्तिकारी नागरिक स्वतन्त्रता समिति बनाऊँ ।’
नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीले शुरुवातदेखि नै नागरिक स्वतन्त्रताको कुरा गरेको छ । रुसमा, चीनमा नागरिक स्वतन्त्रताको कुरा उठेको छैन । तर, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनले नागरिक स्वतन्त्रताको कुरा उठायो ।
२००८ सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पहिलो सम्मेलनमा पारित गरिएको, पुष्पलालले लेखेको दस्तावेजमा ‘नयाँ जनवादका निम्ति नेपाली जनताको बाटो’ लेखिएको छ । यो दस्तावेजमा पनि जबजमा उल्लेख भएका धेरै कुरा समावेश गरिएका छन् । बहुदलीय व्यवस्था, आवधिक निर्वाचनको कुरा पुष्पलालले उहिल्यै गरिसकेका थिए ।
जनताको बहुदलीय जनवाद नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको शुरुवाती दस्तावेजको निरन्तरता हो । २००८ सालको दस्तावेजको परिष्कृत रूप हो ।
२०१० सालपछि नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनमा पनि विभन्न धार, उपधार छुट्टिएका छन् । यी विभिन्न धार–उपधारले आआफ्नै तरिकाले मार्क्सवादको व्याख्या गरेका छन् । कम्युनिस्ट आन्दोलनका धार उपधार छुट्टिँदै जाँदा २०४६ सालमा तत्कालीन माले पार्टीको चौथो महाधिवेशनले बहुदलीयतासहितको नयाँ जनवादी कार्यक्रम पारित गरेको थियो ।
त्यसबाट पनि अगाडि बढेर पाँचौं महाधिवेशनमा आइपुग्दा जनताको बहुदलीय जनवादको रूप धारण गर्यो ।
दार्शनिक आयाममा मदन भण्डारीले द्वन्द्वको नियम सार्वभौम नियम भएको हुँदा यो नियम राजनीतिमा पनि लागू हुन्छ । राजनीतिमा द्वन्द्वको नियम बहुदलीय प्रतिस्पर्धाबाट लागू हुन्छ भन्ने भण्डारीको व्याख्या हो । यो दार्शनिक तर्कका साथ बहुदलीयतालाई स्वीकार गर्ने निर्णय भएको हो ।
हरेक वस्तु/विषयका सार र रूप हुन्छन् । राजनीतिको पनि सार र रूप हुन्छ । राजनीतिको सार भनेको वर्ग चरित्र हो । रूप भनेको शासन व्यवस्था कसरी चलाउने भन्ने कुरा हो । हामीले श्रमजीवी वर्गको राज्य व्यवस्था कायम गर्ने हो । त्यसको रूप एकदलीय पनि हुन सक्छ, बहुदलीय पनि हुन सक्छ । त्यसैले यो रूप पक्ष हो, यो गौण विषय हो । सार पक्ष भनेको त श्रमजीवी वर्गको पक्षमा उभिएको राज्य व्यवस्था हो ।
श्रमजीवी वर्गको अहित हुनेगरी माक्र्सवादको व्याख्या गर्न सकिँदैन । त्यसैले मदन भण्डारीले पनि श्रमजीवी वर्गको हित हुने राज्यव्यवस्थाको नै कल्पना जबजभित्र गर्नुभएको हो ।
पुरानो व्यवस्थाका अवशेषहरू नयाँ व्यवस्थामा आउन सक्छन् । यो कुरा माक्र्सले पनि भनिसकेका छन् । नयाँ व्यवस्थामा आउन सक्ने पुराना व्यवस्थाका अवशेषहरूसँग संघर्ष गर्नुपर्छ । तिनीहरूसँग लड्नुपर्छ । मदन भण्डारीले पनि यो कुरा उल्लेख गरेका छन् ।
बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको राजनीतिलाई अवलम्बन गर्ने । आवधिक निर्वाचन गर्ने । संविधानको सर्वोच्चता स्वीकार गर्ने । विधिको शासन हुने । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अपनाउने । मानवअधिकार पूर्ण पालना गर्ने । मौलिक हकजस्ता विषय रामजनीतिक आयाम हुन् । राजनीतिक आयाम अलिक चाँडै बदलिन पनि सक्छ । जस्तो जबजको प्रहारको निशाना राजतन्त्र थियो, आज राजतन्त्र छैन । गणतन्त्र ल्याइयो ।
जबजले नेपाललाई स्वतन्त्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको रूपमा विकास गर्ने भन्छ । राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग निर्माण गर्ने कुरा गर्छ । यो विषयमा हामी कहाँसम्म पुग्यौं ? स्वतन्त्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गर्न, राष्ट्रिय पुँजीपति निर्माण गर्न नसक्नुमा हाम्रो सिद्धान्तको दोष कि अभ्यासको दोष ?
अहिलेसम्मको समय हामीले राजनीतिक संघर्ष । लडाइँमा खर्च गर्यौं । अब हामीले अर्थतन्त्रतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । जबजले भनेको राजनीतिक परिवर्तनका लागि हामीले लामो समय खर्च गर्यौं ।
अब हामीले अवलम्बन गर्ने बाटो जबज अनुकूल छ कि छैन ? भनेर हामीले सोच्नुपर्छ । जबजले भनेको अर्थतन्त्रको बाटोमा हामीले पाइला अगाडि बढायौं कि नाइँ ?
जबजले भने जसरी उत्पादनका साधनमाथिको स्वामित्वको सामूहीकरण भयो त ?
जबजले सामाजिक समानताको पक्षपोषण गरेको छ । सामाजिक विभेदको अन्त्य गर्ने भनेको छ । वर्गीय, जातीय, लैंगिक, धार्मिक, क्षेत्रीय विभेद समाप्त पार्ने कुरा जबजमा उल्लेख छ ।
जबजले उल्लेख गरेका यी सामाजिक विभेद अन्त्यको बाटोमा हामी कति अग्रसर भयौं त ? सामाजिक समानता निर्माणमा हाम्रो प्रयास कति भयो ? जबजले भनेको सामाजिक रूपान्तरणमा हामीले कति प्रयास गर्यौं भनेर अब प्रश्न गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।
कानूनी हिसाबले हामीले धेरै काम गरिसकेका छौं । तर, ती कानून कार्यान्वयनको पक्षमा हामीले कति प्रयास गरेका छौं ?
सांस्कृतिक चेतनाको परिवर्तन प्रशासनिक हस्तक्षेपबाट हुँदैन । यसका लागि त विश्वविद्यालय, शिक्षाजस्ता विषयमा अग्रसर हुनुपर्छ ।
जबज कति पूरा भयो ?
यी काम भइसकेपछि गणतन्त्र नेपाललाई स्वतन्त्र, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्म निरपेक्ष जनवादी गणतन्त्र घोषणा गर्ने कुरा थियो । यो कति पूरा भयो ? स्वतन्त्र कति भयो ? धर्म निरपेक्ष कति भयो ? सार्वभौमसत्ता सम्पन्न कति भयो त ? आज यी विषयमा बहस केन्द्रित हुनुपर्छ ।
अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न हो– आजको राज्य व्यवस्था जनवादी हो कि होइन ? मदन भण्डारीले भनेअनुसार जनवादी राज्यसत्ता भएपछि जनताको सेवामा काम गर्ने राज्यसत्ता हुनुपर्यो ।
तर, आजको राज्य सत्ता जनवादी कति प्रतिशत छ त ? बहस अब यस्ता प्रश्नवरीपरि केन्द्रित हुनुपर्छ ।
राजतन्त्र फालियो । गणतन्त्र आयो । तर, त्यसपछिको राज्य व्यवस्थाको रूप र सार जबजअनुसार भयो कि भएन ? राज्यको चरित्र जबजले भनेअनुसार भयो कि भएन त ? यो आजको महत्वपूर्ण प्रश्न हो ।
हाम्रो संविधानमै समाजवाद उन्मुख भनेर लेखेका छौं । समाजवाद उन्मुख भन्नु भनेको जबजले भनेको विषय नै हो । तर, लेखेर मात्रै भएन । यो दिशामा हामी कसरी हिँड्दै छौँ भन्ने आजको प्रश्न हो ।
जबज वेस्ट मिनिस्टर मोडल हो ?
कतिपयले जबजलाई वेस्ट मिनिस्टर मोडलको कपि भन्छन् । कम्युनिस्टलाई कांग्रेस बनाउने दस्तावेज पनि भन्छन् । तर, हाम्रा कतिपय बुद्धिजीवीलाई वेस्ट मिनिस्टर प्रणाली के हो भन्ने विषयमा नै भ्रम छ ।
बहुदलीय व्यवस्था हुँदैमा वेस्ट मिनिस्टर हुन्छ भन्ने हो भने त बहुदलीयता पेरिस कम्युनमा पनि थियो । बहुदलीयता अक्टुबर क्रान्ति भएको दुई वर्षसम्म रुसमा कायम थियो ।
बहुदलीयता हुँदैमा वेस्ट मिनिस्टर मोडल हुन्छ । बहुदलीयता हुँदैमा पूँजीपति वर्गकै हुन्छ भन्ने कुरा गलत कुरा हो । चीनमा पनि त सहयोगात्मक बहुदलीय व्यवस्था छ ।
नेपालमा हामीले बहुदलीय व्यवस्था किन भनेका हौं भने कम्युनिस्ट आन्दोलको शुरूवातदेखि नै हामीले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको पक्षमा जाने भनेका छाैं ।
बहुदलीय व्यवस्थामा जाँदैमा पुँजीपति वर्गको हातमा सत्ता पुग्छ । वेस्ट मिनिस्टर मोडल हुन्छ भन्नु अधुरो विश्लेषण हो । फेरि बहुदलीय शासन व्यवस्था भनेको वेस्ट मिनिस्टरबाट मात्रै शुरू भएको होइन । बहुदलीय व्यवस्था भनेको जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरूले शासन गर्ने व्यवस्था त हामी शाक्य गणतन्त्रमा पनि फेला पार्छौं ।
जनताले प्रतिनिधि छानेर राज्य व्यवस्था चलाउने प्रणाली बेलायतबाट आयो भन्नु भनेको बेलायती चिन्तन प्रणालीको दास चिन्तन हो ।
मार्क्सवाद भनेको निषेध गर्ने सिद्धान्त होइन । माक्र्स, एगेल्स, लेनिनले पुँजीवादी प्रजातन्त्रभन्दा फराकिलो आयामको प्रजातन्त्र निर्माण गर्नेे भनेका हुन् । यसका लागि त जनताको प्रतिनिधित्व बढाउनुपर्यो । कसैलाई निषेध गरेर पूँजीवादी प्रजातन्त्रभन्दा फराकिलो प्रजातन्त्र बनाउन सकिन्छ त ?
हो, कहिलेकाहीँ जनप्रतिनिधि पनि गलत हुन सक्छन् । यस्तो अवस्थाका लागि भन्दै कम्युनिस्ट घोषणापत्रको एउटा महत्वपूर्ण विषय थियो जनप्रतिनिधिलाई प्रत्याह्वान गर्ने । जनप्रतिनिधिलाई फर्काउन सक्ने अधिकारको यो विषय आज हामीले छाडेका छौं । यो व्यवस्था हामी लागू गर्न सक्छौं । यस्ता विषयमा बहस गर्न सकिन्छ ।
जबजले मात्रै पुँजीवादीकरण हुन्छ भन्ने कुरा गलत हो । मुलुकलाई पुँजीवादीकरण गराउन त मुलुकले अपनाएको आर्थिक नीति कस्तो हुन्छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ । कुनै पनि व्यवस्थाको जग भनेको अर्थ प्रणाली हो ।
जबज ठीक कि बेठीक भन्नुभन्दा पनि जबजले भनेको दिशामा हामी अगाडि बढ्न खोजेका छौं कि छैनौं भनेर गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ ।
मदन भण्डारीले जबजमा उल्लेख गरेको महत्वपूर्ण विषय छ, ‘शासन चलाउनेहरूले जनताको अभिमत लिएर मात्रै शासन चलाउने अधिकार राख्छन् ।’ जनअभिमतबेगर कसैले पनि शासन चलाउने अधिकार पाउँदैन । जनअभिमत प्रकट त जनताको बीचमा गएर प्रतिस्पर्धा गरेर मात्रै हुन्छ ।
कम्युनिस्ट व्यवस्थामा जनताले नेता छान्न पाउने कि नपाउने ? हामी जनताका लागि हौं भने त जनताबाट छानिन/चुनिन किन डराउने ? जनताबाट चुनिन हामी डराउनु भनेको त हामी पनि अधिनायकवादी भइहाल्यौं नि ।
यसकारण जबज आज पनि सान्दर्भिक छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र अर्थतन्त्र निर्माण गरेर समाजवादको बाटोमा जाने विषय आज पनि सान्दर्भिक छ । अहिले गर्ने नै त्यही हो । सामाजिक विभेद खत्तम गर्दै वैज्ञानिक चेतनाको निर्माण गर्ने कुरा त आज पनि सान्दर्भिक छ । जबजका अन्तरवस्तुलाई आज पनि बोकेर जानुपर्छ ।
केही विषय जस्तै राजतन्त्र हटाउने कुरा, गणतन्त्र ल्याउने कुरा पूरा भइसक्यो । यी विषयलाई संस्थागत गर्दै जबजमा उल्लेख भएका कुरा लागू गर्दै जानुपर्छ । संघीयता भनेको राज्य व्यवस्थाको रूपको पक्ष हो । सार पक्ष भनेको त राज्यको चरित्र हो । हाम्रो राज्यको चरित्र श्रमजीवीअनुकूल बनाउन लाग्नुपर्छ ।
जबज कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रको कार्यक्रम नै होइन
‘जबज’ सरकारी मार्क्सवाद हो
प्रकाशित मिति: सोमबार, भदौ २३, २०७६, ०३:०७:००